IPM – 120 taona : nanafoana ny nendra, miady amin’ny pesta, ny tazomoka, sns | NewsMada
IPM – 120 taona : nanafoana ny nendra, miady amin’ny pesta, ny tazomoka, sns
1898-2018, feno 120 taona amin’ity taona ity ny niorenan’ny Institut pasteur de Madagascar (IPM) etsy Avaradoha. Natao omaly ny fanamarihana izany ka nasongadina ny hoe nisoroka ny faharipahan’ny Malagasy ity foibe ity noho ny asa vitany eo amin’ny tontolon’ny fahasalamana, ny fikarohana ary ny fanofanana.
Foibe fikarohana, miahy ny fahasalamam-bahoaka ary mampiofana, tsy miankina amin’ny fanjakana saingy miara-miasa akaiky amin’ny governemanta malagasy, ny IPM. Tamin’ny fotoana nampihanaka ny areti-mandoza samihafa, toy ny nendra sy ny haromotana, no nanomboka ny tantarany. Efa nisy vaksiny miady amin’ireo aretina ireo, tamin’izany, saingy sarotra ny fitaterana azy ho eto amintsika.
Teo ny nahatonga ny jeneraly Galliéni, governoran’i Madagasikara, hanangana foibe mpamokatra vaksiny. Nanomboka ny volana novambra 1899 ny fivoahan’ny vaksiny miady misoroka ny nendra. Foana tanteraka io aretina io ny taona 1917 ary i Madagasikara no nahavita izany voalohany.
Mikasika ny aretina haromotana, naharitra ela kokoa ny fikarohana sy famokarana vaksiny noho ny olana teknika, saingy ny taona 1901, nisokatra ny sampana miady amin’ity aretina ity ka olona anjatony no noraisina an-tanana, tamin’izany. Nanomboka teo, tsy nitsahatra intsony ny fanaovana vaksiny miaro amin’ity aretina ity ka, isan-taona, mahatratra 6.000 ireo olona manao izany. Tsy mamokatra vaksiny misoroka ny haromotana intsony moa ny IPM fa manafatra sy mitsinjara izany amin’ireo foibe miisa 30 eto amintsika.
Nifanojo tamin’ny firongatry ny pesta ihany koa ny niorenan’ny IPM eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 1898, tsy nitsahatra ny fikarohana ary nandray anjara hatrany tamin’ny ady amin’ity aretina ity ireo ekipany ka anisan’izany ny tamin’ny taon-dasa.
Nasongadin’ireo nandaha-teny, omaly, ny fivoarana nentin’ny IPM teo amin’ny fahasalamana sy ny fanatsarana ary ny fanitarana ao aminy. Ankehitriny, misy sampam-pikarohana sivy ao. Ireo aretina mbola mateti-pitranga, toy ny tazomoka, ny raboka, ny gripa, ny lefakozatra, ny bilarziozy, no sahanina manokana.